Agaasimihii hore ee Hey’adda Nabadsugida oo ka digay falal Argagixiso oo Muqdisho ka dhaca – idalenews.com
Agaasimihii hore ee Hey’adda Nabadsugida qaranka Axmed Macalin Fiqi ayaa ka digay falal argagixiso oo ka dhaca Caasimada Muqdisho, kadib markii warbixin ay soo saartay dowladda Britain ay kaga digtay qorshayaal ku aadan weeraro Argagixiso oo Al-Shabaab ka geysan rabto magaalada Muqdisho.
Isagoo ka hadlayay xaflad sagootin ah oo Muqdisho loogu sameeyay Agaasimihii hore Hey’adda Nabadsugida ayuu ugu baaqay dowladda in aanay dhayalsan digniinaha soo baxaya, isla markaana si ficil uga jawaabto.
“Caasimada Muqdisho waxay ka soo kabaneysay dhibaatadii ay soo martay, dadka Soomaaliyed waa cusub ayay ku waabariisteen oo ka duwan kuwii sanadihii hore jiray, hada waxaa soo baxaya digniino qatar wata oo falal argagixiso ay maleegayaan argagixisadu”ayuu yiri Agaasimihii hore Hey’adda Nabadsugida qaranka.
Axmed Fiqi ayaa sidoo kale sheegay inay suura gal tahay inay dhab noqoto digniinaha la soo saaray, hase ahaatee loo baahan yahay in hey’adaha ammaanka ay feejignaan dheeri ah galaan, si looga hortago.
“Waa arrin dhab noqon karta sida ay u sheegeen dowladda Ingiriiska, waa in hanjabaadaha Argagixisada la sheegay si ficil dowladda uga jawaabto”ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi oo horay isaga casilay xilkii Agaasimaha Hey’adda Nabadsugida qaranka.
Waxaa uu sheegay in Al-Shabaab aan lagula dagaalami karin kaliya Taangiyo ama madaafiic, hase ahaatee loo baahan yahay dhalinyaro sidooda oo kale oo dhex gala, sida ay u fikiraan u fikira, in dhalinyaradaas lagula dagaalamo, si looga hortago ficilada ay wadaan.
Xukuumada Soomaaliya oo ka jawaabtay digniinta ka soo baxday dowladda Britain ayaa sheegtay in aanay Muqdisho xilligan ka jirin qatar, hase ahaatee ciidamada ammaanka ay wadaan howl galo ammaanka lagu xaqiijinayo.